Toerana tsara hitsidihana an'i Pondicherry
Puducherry, antsoina matetika hoe Pondicherry, dia iray amin'ireo faritany fiton'i India. Izy io dia zanatany frantsay tranainy any amin'ny faritra atsimo-atsinanan'ny Saikinosy Indiana izay ahitana ny tontolon'ny Frantsay amin'ny fiainana an-dranomasina.
JE T'AIME, PONDICHERRY! Tongasoa eto amin'ny Tanàna mavo. Tanàna misy vakoka, boulevards be olona, ​​tora-pasika mazava kristaly, sakafo matsiro, ary fahatsiarovana mahafinaritra. Ny maritrano ao an-tanàna dia taratry ny fanjanahantany frantsay taloha fa mampifangaro ny fahatsapana nentim-paharazana Indiana. Ny fitsangatsanganana eny an-dalambe dia ampy ho anao hanana fifankatiavana amin'i Pondicherry satria tsy azo ihodivirana amin'ny hatsarany toy ny angano.
Ny tranobe mavo mavo misy voantsinapy mahavariana tamin'ny taonjato faha-18 miaraka amin'ny rindrina feno bougainvillea mamelana ao amin'ny White Town dia manome fomba fijery mahafinaritra mandritra ny dia an-tongotra.
Pondicherry dia voatahy amin'ny morontsiraka mahafinaritra ary mipetraka ao anaty ranomasina ny fanahiny. Ho voasinton'ny tora-pasika mahafinaritra ianao amin'ny fitsidihanao eto. Raha te hanaram-po amin'ny aventure ianao, dia malaza eny amoron-dranomasina ny fanatanjahan-tena an-drano. Ankoatra izany, tsy hadino ny trano fisakafoanana frantsay tena izy sy trano fisotroana kafe toy ny Café des Arts, Le Rendezvous, sns izay hanampy anao hahavoky ny tsironao.
Ny fitsidihana an'i Pondicherry amin'ny volana Oktobra ka hatramin'ny Martsa dia mety tsara satria mangatsiatsiaka ny andro dia afaka mandeha mitsangatsangana sy manao hetsika an-kalamanjana ianao. Raha efa nanomboka naka sary an-tsaina ny tenanao mamaky boky ao amin'ny iray amin'ireo trano fisotroana kafe malaza ao amin'ny White Town ianao na mandeha eny amin'ny promenade mitety ny boulevards sy ny araben'i Pondicherry izay mitondra anao any amin'ny tora-pasika mahafinaritra indrindra, dia voasaronay ianao. Ity misy lisitra feno amin'ireo toerana mahazatra anao hijerena ny maritrano kolonialy sy ny tora-pasika tena tsara tarehy ao Pondicherry.
Mila ianao Visa e-Tourista any India (e India or Visa Indiana Online) mba hanatri-maso ireo toerana sy traikefa mahagaga amin'ny maha-mpitantany vahiny azy any India. Raha tsy izany, afaka mitsidika an'i India ianao amin'ny a Visa any India e-Business ary te hanao fialam-boly sy fitsangantsanganana any avaratr'i Inde sy any am-pototry ny tendrombohitra Himalaya. ny Fahefana misahana ny fifindra-monina Indiana mamporisika ny mpitsidika any India hangataka fangatahana Indian Visa Online (e-Visa any India) fa tsy mitsidika ny Kaonsily indianina na masoivoho indiana.
Paradise Beach, hita ao Chunnambar manaraka ny lalana Cuddalore, dia iray amin'ireo tora-pasika madio indrindra ao Pondicherry. Ny fasika volamena sy ny rano madio dia mahatonga ity tora-pasika mitoka-monina ity ho toerana mahafinaritra hotsidihina ao Pondicherry. Miorina eo amin'ny 8 km miala ny tobin'ny Bus Pondicherry, tsy maintsy maka sambo avy ao amin'ny trano bongo ao Chunnambar ianao mamakivaky ny renirano, izay mety haharitra 20-30 minitra.
Mahafinaritra ny dia satria maitso ny rano mihemotra eny an-dalana ary misy ala honko matevina, indrindra rehefa avy ny monsoon. Mety hanintona ny sain'ny mpaka sary na mpankafy sary ilay dia noho ny fomba fijery mahafinaritra miaraka amin'ny vorona ary indraindray ny feso izay tazana mandritra ny dia. Mifarana ny fiarandalamby miaraka amin'ny fahitana tora-pasika madio iray voaravaka ny fasika volamena, ny ranony manga, ary ny tontolo milamina. Misy trano bongo vitsivitsy eo akaikin'ny fidirana mankany amin'ny tora-pasika ary azonao atao ihany koa ny manaram-po amin'ny hanim-py tsotra ao amin'ny bar izay manolotra zava-pisotro malefaka sy tsakitsaky, sns. Azonao atao ny mankafy ny fotoananao amin'ny masoandro na miala sasatra eo ambanin'ny tsio-drivotra mangatsiatsiaka amin'ny hazo palmie mpanjaka manarona ny tora-pasika. sady nisotro rano voanio vao.
Paradise Beach dia toerana tsara ahafahana mijery tsara ny fiposahan'ny masoandro amin'ny morontsiraka atsinanana. Ny tora-pasika dia tsidihin'ny mponina sy ny mpizaha tany mandritra ny faran'ny herinandro izay mahatonga ny fitohanan'ny fiara ary satria mahery ny onjan-drano indraindray, dia tsy mety ny miditra lalina kokoa any an-dranomasina eto. Na dia voarara aza ny milomano, dia misy fitaovana isan-karazany amin'ny fanatanjahantena an-drano, volley, harato ary fanjonoana ho an'ireo mpitsidika. Ny ampahany iray mampientanentana momba ny fitsidihana ny Paradise Beach dia ny fahafahana mandany alina ao anaty trano hazo. Misy fitsaboana tsara kokoa ho an'ny tia natiora ve?
Bazaar any India
Auroville dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany lehibe ao Pondicherry ary malaza, indrindra amin'ireo mitady fampiononana. Ny toerana, naorin'ny Mirra Alfassa, ny Neny ny Aurobindo fiaraha-monina, dia eo amin'ny 15 km miala ny tanàna, any Tamil Nadu. Ity toerana ity dia azo raisina ho toy ny tandindon'ny fahatoniana ary manolotra fandosirana tonga lafatra amin'ny zava-misy ary mamindra ny iray ho any amin'ny tontolon'ny fandriampahalemana.
Antsoina hoe ny Tanànan'i Dawn, Auroville dia tanàna futuristic izay mikendry ny hampiray ny olona avy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana sy avy amin'ny vazan-tany rehetra na inona na inona sarangany, lokony, fanekeny ary fivavahana. Midika hoe a tanàna universal izay ahafahan'ny olona avy amin'ny firenena rehetra, manaraka kolontsaina sy fomban-drazana samihafa, miara-miaina tsy misy fanavakavahana. Nandritra ny fitokanana ity tanàna ity dia tany avy amin'ny firenena 124 ka anisan'izany ny Indiana avy amin'ny fanjakana 23 samihafa no nentina sy napetrany tao anatin'ny urna miendrika lotus mba hanehoana ny firaisan'ny rehetra.
Eo afovoan'i Auroville dia misy rafitra miendrika globe volamena lehibe antsoina hoe Matrimandir izany no Tempolin'ny Reny Masina. Matrimandir dia foibe fisaintsainana mahafinaritra mba hipetrahan'ny mpitsidika sy hampifantoka ny sainy amin'ny tena ao anatiny. Ny hazavan'ny andro dia miditra amin'io habaka io avy eo amin'ny tafo ary mitodika mankany amin'ny globe kristaly lehibe iray izay manazava ny fifantohana amin'ny fanafody.
The Aurovilleans miara-monina manaraka ny foto-kevitry ny Reny, toy ny fiadanana, ny firaisan-kina, ny fiainana maharitra ary ny fahatsiarovan-tena araka an’Andriamanitra. Nahomby i Auroville tamin'ny fampiroboroboana ny hafatr'i Mirra Alfassa sy ny fametrahana tontolo mirindra. Afaka mipetraka ao anaty kafe ianao ary miresaka amin'ny mponina sasany momba ny traikefa niainany tao amin'ny tanàna andrana.
Mussoorie Hill-station eo am-pototry ny Himalaya sy ny hafa
Serenity Beach dia malaza be amin'ny mpandeha satria madio sy milamina, toy ny lazain'ny anarany. Ny tora-pasika dia eo amin'ny sisin'ny Pondicherry in Kottakuppam, eo amin'ny halavirana 10 km miala ny Garan'ny Bus Pondicherry, ary akaikin'ny lalana East Coast. Koa satria mitoka-monina amin'ny tanàna ny tora-pasika, dia manjaka eto ny rivo-piainana mirindra sy mangina tanteraka. Ny tora-pasika dia miarahaba ny mpitsidika amin'ny fahitana ny fasika volamena sy ny rano manga.
Ny sandan'ny ranomasina milamina dia mahatonga azy io ho toerana tonga lafatra ho an'ny dia an-tongotra am-pitiavana, milomano amin'ny masoandro, ary milomano na miala sasatra sy milomano ao anatin'ny feon'ny onja mihetsiketsika mihetsiketsika. Ny tora-pasika dia manolotra fialan-tsasatra tonga lafatra amin'ny fiainana an-tanàn-dehibe satria ny rano manjelanjelatra ao amin'ny Bay of Bengal mahafinaritra, ny fasika oroka masoandro ary ny fahatoniana tsy manam-paharoa izay iainanao eto dia haka ny fanahinao.
Raha toa ianao ka mahatsiaro ho aventure, Ny tora-pasika dia manolotra hetsika ara-panatanjahan-tena isan-karazany toy ny surf, lakana ary kayak. Ny tora-pasika dia malaza amin'ny mpanao surf ary sekoly surf vitsivitsy ihany koa no hita eo akaikin'ny tora-pasika satria ny onjan-dranomasina lehibe dia manome fahafahana manao surf. Tena malaza amin'ny mpanjono ny tora-pasika. Eo akaikin'ny tora-pasika ihany koa ny foibe yoga ho an'ireo mpitsidika liana amin'ny fianarana ny zavakanto yoga. ny Serenity Beach Bazaar, fantatra koa amin'ny hoe Tsena asa tanana, mampiranty ny vokatra avy amin’ireo boutique eto an-toerana toy ny akanjo, kojakoja hoditra, asa tanana ary tsy misokatra afa-tsy ny faran’ny herinandro manomboka amin’ny 10 ora maraina hatramin’ny 5 ora hariva. Ity hatsaran-tarehin'ny natiora manjelanjelatra ity no toerana tsara indrindra hipetrahanao eo ambanin'ny alokaloka miaraka amin'ireo olon-tianao.
Ity malaza vondrom-piarahamonina ara-panahy na ashram dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany milamina indrindra ao Pondicherry. Ny ashram hita ao amin'ny White Town of Pondicherry amin'ny halavirana 2.5 kms miala ny tobin'ny Bus Pondicherry dia naorin'ny Sri Aurobindo Ghosh tamin'ny 1926. Sri Aurobindo dia nametraka ny fototry ny ashram tamin'ny 24 Novambra 1926 taorian'ny nisotroany tamin'ny politika teo anatrehan'ny mpianany. Ny tanjona lehibe amin'ny ashram dia ny hanampy ny olona amin'ny fahazoana 'Moksha' ary fiadanana anaty. Ny ashram dia mbola tsidihin'ny mpizaha tany mitady fiadanana, fahatoniana ary fahalalana ara-panahy. Ao Pondicherry irery no misy ny ashram ary tsy manana sampana hafa. Taorian'ny nahafatesan'i Sri Aurobindo tamin'ny 1950, dia nokarakarain'ny Ashram Mirra Alfassa izay iray amin'ireo mpanaraka an'i Aurobindo ary noheverina ho 'Neny' ny Ashram.
Ny ashram dia mahafaoka tranobe maromaro ary mpikambana 1000 mahery miaraka amin'ny mpianatra sy mpivavaka 500 mahery. Mandritra ny fetibe, velona ny Ashram satria mpizahatany sy mpanaraka an'arivony no mitsidika an'io toerana io. Na izany aza, ny mpikambana dia manao izay hitazonana ny rivotry ny fifehezana sy ny fandriampahalemana ao anatin'ny ashram. Ny ashram koa dia ahitana tranomboky, milina fanontam-pirinty, galeri-kanto, miaraka amin'ny habaka hafa. Mba hiantohana ny fahasalaman'ny mpikambana sy ny mpitsidika amin'ny ankapobeny, hetsika ara-batana maro toy ny fanatanjahan-tena, asanas, milomano, miofana tanjaka, sns dia atao ao amin'ny ashram ihany koa. Trano efatra tao amin'ity foibe ara-panahy ity ihany koa no nonenan'ny 'Neny' ary Sri Aurobindo mandritra ny vanim-potoana samihafa. Ny 'Samadhi' an'i Sri Aurobindo sy Neny dia eo an-tokotany eo afovoan'ny ashram eo ambanin'ny hazo frangipani ary ny olona avy amin'ny lafivalon'izao rehetra izao dia mitsidika an'io toerana io mba hanome voninahitra amin'ny fametrahan-boninkazo eo amboniny. Raha mirona mankany amin'ny ara-panahy sy ny fisaintsainana ianao, Aurobindo Ashram no toerana mety indrindra ho anao hisaintsainana ny tenanao mba hiainana sy hahazoana fahazavana ara-panahy.
Ireo mpizahatany vahiny tonga any India amin'ny e-Visa dia tsy maintsy tonga amin'ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina voatondro. na Delhi sy Chandigarh dia seranam-piaramanidina voatokana ho an'ny e-Visa karana akaikin'ny Himalayas.
Promenade Beach, fantatra ihany koa amin'ny hoe Rock Beach, dia iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana tsara tarehy sy fakana sary ao Pondicherry noho ny fasika volamena. Any amin'ny halavirana 3.5 km miala ny tobin'ny Bus Pondicherry, Promenade Beach no tena tian'ny olona. Ny tora-pasika dia antsoina amin'ny anarana maromaro toy ny Rock Beach noho ny fisian’ny vato eny amoron-dranomasina sy Gandhi Beach noho ny sarivongan'i Mahatma Gandhi eo amoron-dranomasina. Mirefy 1.5 km eo ho eo eo anelanelan'ny War Memorial sy Duplex Park eo amin'ny Goubert Avenue izy io, manome fomba fijery mahavariana momba ny tontolo mahafinaritra.
Ny Goubert Avenue no faritra manan-tantara ao Pondicherry izay misy tranobe kolonialy tsara tarehy. Izany dia noho ny fisian'ny marika malaza toy ny ny Fahatsiarovana ny ady, ny sarivongan'i Joan of Arc, Mahatma Gandhi, ny Lapan'ny tanàna, ny Lighthouse taloha 27 metatra, io tora-pasika Promenade io dia heverina ho toerana mahafinaritra ho an'ny mpizaha tany. Amin'ny hariva, indrindra amin'ny faran'ny herinandro, dia misy sokajin'olona samihafa tonga eny amin'ny tora-pasika mba hilalao volley, jogging, mandeha an-tongotra, na milomano.
Na dia eo aza ny vahoaka, ny tora-pasika dia voakojakoja tsara sy mahatalanjona ary mamela ny mpitsidika handany takariva mahafinaritra mijery ny fahitana mahafinaritra ny onja mifangaro amin'ny morontsiraka be vato. Ny fitsidihana ny tora-pasika mandritra ny ora maraina dia mety ho hevitra tsara satria ny tora-pasika dia tsy dia feno olona ary afaka mahita ny ranomasimbe ianao, ny rano amin'ny voninahiny feno. Azonao atao ihany koa ny mandeha amin'ny lalana lava amin'ny tora-pasika mikaroka ireo toerana manan-danja rehefa mifoka rivotra madio. Misy fivarotana asa tanana isan-karazany eo an-toerana, trano fisakafoanana ary trano fisakafoanana manolotra sakafo nentim-paharazana tena izy eny amoron-dranomasina ho an'ny mpitsidika mba hanomezana fahafaham-po ny tsirony Ny kafe malaza, Le Café akaikin'ny tora-pasika ihany koa no misy azy ary tsy maintsy andramana ho an'ireo tia hazan-dranomasina. Raha mitady fialan-tsasatra amin'ny fiainanao mahazatra sy tsy misy dikany ianao, dia ny fitsidihana ny Promenade Beach no safidinao!
Fepetra takiana amin'ny e-Visa Indiana
Bazilikan'ny Fo Masin'i Jesoa
Ny Basilica an'ny Fo Masin'i Jesosy dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra ao Pondicherry noho ny hatsarany. maritrano gothic. Io toerana masina ara-pivavahana io dia naorin'ny misionera frantsay tamin'ny 1908 ary nasandratra tamin'ny toeran'ny Basilika tamin'ny taona 2011 ka io no hany Basilika ao Pondicherry amin'ireo Basilika 21 any India. Any amin'ny halavirana 2.5 km miala ny tobin'ny Bus Pondicherry no misy azy. Ny sarin'ny Fo Masin'i Jesoa sy Maria Reny dia voasokitra eo amin’ny varavarana fidirana miaraka amin’ireo teny ara-baiboly voasokitra amin’ny teny latina. Izy io koa dia misy takelaka fitaratra tsy fahita firy izay mampiseho ny fisehoan-javatra isan-karazany amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny olo-masin'ny Fiangonana Katolika. Mivory eto ireo mpivavaka amin’ny lafivalon’izao tontolo izao mba hivavaka amin’ny Tsitoha sy hahazoana fiadanana. Ny hetsika toy ny Taom-baovao, ny Krismasy ary ny Paska dia ankalazaina amin'ny fomba lehibe ao am-piangonana. Ity Fiangonana Katolika tsara tarehy ao Pondicherry ity dia hanala anao amin'ny zava-misy henjana amin'ny fiainana haingana ary hamindra anao ho amin'ny tontolo milamina.
Toerana tsara indrindra hitsidihana an'i Jammu sy Kashmir
Olom-pirenena amin'ny firenena maro ao Etazonia, Frantsa, Danemark, Germany, Espaina, Italia dia afaka India e-Visa(Indian Visa Online). Azonao atao ny mangataka ny Fampiharana e-Visa an-tserasera Indiana eto indrindra.
Fangatahana India Visa